Ugbo Illinois iji ogwu ike - Ibe iwu nke marijuana na Illinois
-akpọ Ugbu a
Jiri Ogbenye Illinois Jiri Iwu Ọgwụ Cannabis
Nke a bụ nchịkọta nke Okenye si JB Pritzker site na Mee, 2019. Nke ghọrọ iwu dị iche.
Ọ bụrụ na ị chọrọ Akwụkwọ ikike izipu Illinois - pịa ebe a.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a akwụkwọ ikike ikike na Illinois - pịa ebe a.
Mgbe na kedu ka Illinois ga-esi debanye aha ndị okenye n'ibu
Malite na Jenụwarị 1, 2020, ndị okenye karịrị afọ 21 ga-enwe ike ịzụta cannabis n'ụzọ iwu kwadoro site na ndị nkesa nwere ikikere n'ofe steeti Illinois.
Maka ụgwọ akwụkwọ 522 zuru ezu Pịa ebe a
Inwe igbo wii wii:
Ngwunye cannabis abụghị nke akparaghị ókè, ihe dị ka otu ounce nke marijuana nwere ike ịbụ nke onye bi na Illinois okenye tozuru oke - dị ka ihe ndakpọ na-agbakọta ma chọọ ka agbakwunye ya, belụsọ maka itolite ụlọ.
Ndị bi na Illinois
Ifuru wiiji 30 grams
5 grams cannabis uche
500 mg nke THC cannabis nyere ngwaahịa; ma obu
Osisi ise ruru ndị bi na Illinois nke ruru eru
Ndị na-abụghị ndị bi na Illinois
ọkara ego ahụ dị ka ndị bi na Illinois
enweghị ụlọ tolitere nye ndị na-enweghị ebe obibi
Iji Okenye Agbanwe Agbanwe Agbanweghị Ahụike Ahụike Illinois
Mmefu iwu nke Illinois Marijuana na-akwalite hara nhatanha
The imebi iwu cannabis na Illinois na-achọ idozi ikpe na-ezighị ezi nke oge gara aga site na ịmepụta ndị abanye ọhụrụ na ahịa cannabis maka "ndị na-achọ ịha nhatanha mmekọrịta." Ngalaba Azumaahịa na Ohere Akụnụba (DCEO) ga-ahụ maka mmefu ego ọmụrụ nwa obere nde dọla 20 (DCEO) maka ndị na-achọ ịha nhatanha n'etiti ọha na eze.
Onye anamachọ ịha nhatara ọhaneze na Iwu Iwu Cannabis
Onye na-ahụ maka ịha nhatanha bụ onye bi na Illinois nke na-ezute opekata mpe otu.
Akwụkwọ anamachọihe dịka opekata mpe njikwa 51 na otu onye ma ọ bụ karịa biela ma ọ dịkarịa ala 5 n'ime afọ 10 bu ụzọ na mpaghara emetụtara.
Ochichi nke nwere opekata mpe ma ọ bụ nwee ikike na pasent 51 nke otu ejidere ejidere maka ya, maa ya ikpe, ma ọ bụ kpee ikpe ịnọ n'ụlọ ikpe ụmụaka maka mmebi ọ bụla ruru eru maka mkpochapu n'okpuru Iwu a ma ọ bụ onye otu ezi na ụlọ.
Ugbu a bi na mpaghara nsogbu emetụtaghị ya; ma obu
E jidere gị maka ikpe, maa ya ikpe, ma ọ bụ tụọ mkpọrọ ka ọ bụrụ onye uwe ojii nke ụlọ ikpe ụmụaka maka mmebi ọ bụla ruru eru ikpochapụ n'okpuru Iwu a ma ọ bụ onye otu ezinụlọ emetụtara.
Ihe iri abụọ na ise (25) maka “ndị na-achọ akwụkwọ” ọhụụ ga-adabere na “Ndị chọrọ ntinye akwụkwọ.
Ndị tinye akwụkwọ ọhụrụ na ahịa Illinois Cannabis
Ngalaba Ọrụ Ugbo ga - azụlite - site na ịchịkwa usoro - usoro iji kọwaa ndị chọrọ ịga ọhụrụ ka ha banye na ndị okenye ji ụlọ ọrụ cannabis maka ebe a na-akọ ahịhịa, ebe a na-ere akwụkwọ na ndị na-akọ ọka.
Ndi Scores sitere na ozi sitere na iwu, nke di na ntuli aka 200. Isi iri abụọ na ise bilitere na ndị na-achọ akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, yana ụzọ 25 ọzọ maka ndị chọrọ cannabis ga-akwụrịrị ụgwọ maka:
Ọrụ na ọrụ (2)
Ọrụ udo nkwekọrịta (2)
Akụkọ obodo / agbata obi (2)
Atụmatụ gburugburu obibi (2)
Illinois nwe (2)
Atụmatụ itinye aka na obodo (2)
Mmachi na ikike azụmahịa Cannabis na Illinois
Onweghi onye ma obu ihe obula ga - ejide ikike iwu, kwesiri ya ma obu uru bara uru, ma obu n’usoro, nke kariri oru ato a na - akụ.
Onweghi onye ma obu ihe obula ga - ejide ikike iwu, kwesiri ma obu ihe bara uru, ozugbo ma obu n’edighi aka, nke ihe kariri otu iri na-ekesa.
Agaghị enye mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ikike nwere ihe karịrị 10% mmasị na ọrụ ịkụ ọrụ agaghị enye mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 10% mmasị na mpaghara ịkụ ọrụ.
Onweghi onye ma obu ihe obula ga-ejigide ikike nke aka ma obu ihe kwesiri ntukwasi obi, ma obu ikike ya, ma obu nke bara uru, ozugbo ma obu n’adighi, nke karia otu ikike oru ahia di n'okpuru edemede a.
Guzobe onodu “onye na-acho hara nhatanha” nke inye ikike
Onye na-ahụ maka ịha nhatanha bụ onye bi na Illinois nke na-ezute otu n'ime njirisi ndị a:
Akwụkwọ anamachọ ihe nwere otu ma ọ bụ karịa njikwa ma ọ dịkarịa ala 51 wee bie opekata mpe 5 n'ime afọ 10 bu ụzọ na mpaghara emetụtara.
Ochichi nke nwere opekata mpe ma ọ bụ nwee ikike na pasent 51 nke otu ejidere ejidere maka ya, maa ya ikpe, ma ọ bụ kpee ikpe ịnọ n'ụlọ ikpe ụmụaka maka mmebi ọ bụla ruru eru maka mkpochapu n'okpuru Iwu a ma ọ bụ onye otu ezi na ụlọ. ;
Maka ndị na-achọ akwụkwọ nwere opekata mpe ndị ọrụ 10, onye na-eme akwụkwọ nwere opekata mpe 51% nke ndị ọrụ ugbu a ndị:
ndị okenye na-anụ ọkụkọ maka nchịkọta cannabis ọhụrụ
Ngwa maka ndị bịara ọhụrụ na ndị okenye Illinois na-eji ahịa cannabis
Usoro nlegharị anya nke ihe nkesa. (Ngalaba Ọrụ Ugbo ga-azụlite usoro yiri ya site na usoro mmebi nke ebe a na-akụ mkpụrụ, ihe nhazi, na ndị na-akụ ọrụ.
N'ime ngụkọta nke isi narị abụọ, ihe iri abụọ na ise ka akọwapụtara maka ndị na-achọ akwụkwọ ruru eru dị ka "ndị chọrọ inwetara ọhaneze."
IDFPR nwere ike inye ihe ruru paradaịs iri na abụọ maka ndị rịọrọ maka ebumnuche ha, mana achọrọghị. A ga-enyerịrị ihe nrịbama ego n'ememe na ngalaba ahụ na-enweta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị ruru ọtụtụ isi ihe achọrọ.
Wagwọ anaghị efe
Ngalaba Na-ahụ Maka Ego na Ọrụ Ndị Ọrụ na Ngalaba Ọrụ Ugbo ga-agbagha pasent 50 nke akwụkwọ ikike ikikere na-enweghị nkwụghachi ụgwọ (ihe ruru 2) yana ụgwọ anaghị akwụghachi ọ bụla metụtara ịzụta ikike iji rụọ ọrụ ntọala azụmahịa cannabis (ruo ikikere abuo) ma ọ bụrụ na ndị na-achọ ịha nhatanha na-ezute ụfọdụ ọnọdụ.
Mbelata ụgwọ ọrụ dị n'ihu maka akwụkwọ ikike iji nweta akwụkwọ ọhụrụ
Ndị anamachọihe nke natara akwụkwọ ikike ịnata akwụkwọ ikike ịnata ọnọdụ ga-enwe ụbọchị 180 site na ụbọchị e nyere onyinye iji chọpụta ebe dị adị maka ụlọ ahịa na-ere ahịa na-ere ahịa mgbe anabatara ndị ọhụrụ na ahịa. Nke a ga - ebelata ụgwọ ndị metụtara ịbanye na ụlọ ọrụ.
AMQUAKA AH ILR IN NA ILLINOIS NA AKW CKWỌ AKWANNKWỌ AKW ANDKWỌ AKW ANDKWỌ NA-AH AND AH L.
Ezubere usoro na - esote iji hụ n'ọma ahịa kachasị na mba ahụ.
Nkwuputa nkwanye ugwu okenye na-eji ikike maka ndị nwere ikikere cannabis ugbu a
Usoro iheomume maka inye ikikere
Ndi otu oru ugbo:
Ndị ọrụ ọkụkụ cannabis nwere ike itinye akwụkwọ maka ikikere n'ime ụbọchị 60 nke ụbọchị dị irè nke Iwu ahụ.
A ga-ekenye ndị na-achọ akwụkwọ ruru eru tupu ụbọchị iri anọ na anọ.
Mkpesa cannabis ọgwụ nwere ike itinye akwụkwọ maka ikikere n'ime ụbọchị 60 nke ụbọchị dị irè nke Iwu ahụ.
Re ire cannabis maka ndị okenye ga-amalite na Jenụwarị 1, 2020.
Entlọ ọrụ ndị a nwere ike itinye akwụkwọ maka ikike nke abụọ na ebe ọhụrụ n'okpuru otu parampat.
Ibelata ikikere maka nnabata izizi nke okenye
Akwụkwọ ikike ikike akwụghachighị ụgwọ: $ 100,000
Ego ịzụlite azụmaahịa azụmahịa Cannabis: 5% nke ngụkọta ahịa n'etiti July 1, 2018 rue July 1, 2019 ma ọ bụ $ 500,000, nke ọ bụla pere mpe.
Akwụkwọ ikike ikike akwụghachighị ụgwọ: $ 30,000
Ego ịzụlite azụmaahịa azụmahịa Cannabis: 3% nke ngụkọta ahịa n'etiti July 1, 2018 rue July 1, 2019 ma ọ bụ $ 100,000, nke ọ bụla pere mpe.
Permitkwụ ụgwọ ikike ikike akwụghachi: 30,000
Nkwado ego azụmahịa mmepe Cannabis: $ 200,000
Ndị na-abanye ndị okenye ọhụrụ na-eji ahịa cannabis
Dị akwụkwọ ikike
Ebe a na-akọ ugbo
Ndị na-akụ ọrụ aka
Usoro iheomume maka azụmahịa Cannabis Ọhụrụ
Ngalaba Ego na Usoro iwu ọkachamara
Mee 1, 2020: agencylọ ọrụ ahụ nyere ndị ikikere ruru ihe dị ka nzukọ ọhụrụ ise dị iri asaa ọrụ
Ngalaba Ọrụ Ugbo
Julaị 1, 2020: agencylọ ọrụ ahụ na-enye ikikere ruru iri anọ maka ndị na-ahazi ọrụ, ikikere 40 maka ndị na-azụ ihe, yana ikikere maka ndị otu.
Disemba 21, 2021: agencylọ ọrụ ahụ nyere ndị ọrụ ikikere ruru akwụkwọ ikike 110
Disemba 21, 2021: agencylọ ọrụ ahụ na-enye ikikere maka ndị na-azụ ihe ruru 60 ikikere, yana ikikere 60 maka ndị na-ahazi ọrụ, yana ikikere maka ndị njem.
Ibelata ikike maka ndị ọhụrụ abanye na azụ ahịa cannabis nke Illinois
Akwụkwọ anaghị akwụghachi ego $ 5,000
Akwụkwọ ikike ikike $ 40,000
Akwụkwọ ikike ikike $ 10,000
Akwụkwọ ikike ikike $ 30,000
INmata ozi ndị dara n'etiti agha ahụ
Ndokwa a ga-ewulite mmemme onyinye ọhụrụ, iweghachi obodo anyị (ROC), itinye ego na obodo tara ahụhụ kachasị n'ihi usoro ịkpa oke ọgwụ.
Nyocha usoro ROC
ICJIA ga-ahazi “ROC Areas” ma ọ bụ ọnọdụ ebe ndị na-achọ akwụkwọ ga-eru maka itinye ego maka steeti site n'aka ROC Board.
ROC Board ga - eme ihe karịrị ndị otu 22 ma Gọvanọ, ma ọ bụ onye nnọchi anya ya, na Attorney General, ma ọ bụ onye ọ họpụtara ga-abụ onye isi oche.
ROC Board ga-ewulite akwụkwọ onyinye, na-arịọ arịrịọ sitere na mpaghara ROC ruru eru, kesaa onyinye ego na steeti ahụ, ma nyochaa ma nyochaa mmemme ROC.
OClọ ROC ga-ebugara thelọ Ọrụ Gọvanọ akụkọ akụkọ kwa afọ banyere ọganihu ya.
MAKA INWETA CANABIS AKWORDKWỌ AKW INKWỌ AKW ILKWỌ N'IWU ILLINOIS
Ndị a na-esote mmejọ mmebi ahụ ruru eru ka ebipu ya.
Nkebi 4 (iwu akwadoghị ka onye ọ bụla nwee ike ịma cannabis n'ụkpụrụ ndị a)
a. <10g Mkpesa iwu obodo
Enwere ike inye ya nnwale na chụpụrụ §10 (a)
b. 10-30g Klas B Misdemeanor
c. 30-100g Klas A Misdemeanor
d. 100-500g Klas 4 Felony 1-3 afọ
Nkebi nke 5 na-emepụta / nyefe
(iwu akwadoghị ka onye ọ bụla kpachara anya mepụta, nyefee, ma ọ bụ nwee ebumnuche iji nyefe ma ọ bụ mepụta cannabis n'ihe ndị a
a. <2.5g Klas B Misdemeanor
b. 2.5-10g Klas A Misdemeanor
c. 10-30g Klas 4 Felony
Nkebi nke 8 Osisi (iwu akwadoghị ka onye ọ bụla kpachara anya mepụta ma ọ bụ nwee osisi cannabis sativa ọ gwụla ma ikike nyere maka ebumnuche nyocha)
a. <5 osisi Klas A Misdemeanor
b. 5-20 osisi Klas 4 Felony
Usoro maka mkpochapu Mpụ Illinois Cannabis
Ndokwa a na-ewepụta usoro gafere oge nke ịchụpụ ndekọ ndị omempụ nke ndị mmadụ ejidere, ikpe ya ikpe, ma ọ bụ na nnwale maka mmebi iwu ma ọ bụ mmebi iwu Klas nke 4 nke Iwu Njikwa Cannabis. Ebumnuche ebumnuche ndị dị na ngalaba a bụ (1) ndekọ metụtara cannabis, yana (2) depụta usoro ahụ.
Usoro mkpochapu akpaka chọrọ ihe ndị a:
Ngalaba ndị uwe ojii ga-amata onye ọ bụla nwere ndekọ mpụ nke ruru eru maka mkpochapụ ma kpochapụ ndekọ nke obere mpụ n'ime afọ abụọ nke ụbọchị nke Iwu ahụ dị.
N'ime ụbọchị 180 nke ụbọchị arụmọrụ a, Ngalaba ndị uwe ojii ga-agwa (a) ụlọ ọrụ ndị ọka iwu na-ahụ maka ịda iwu ahụ, (b) ụlọ ọrụ mmanye iwu obodo, na (c) ụlọ ọrụ Attorney General nke na-achọpụta mmadụ niile. na obere mmebi iwu ruru eru maka mkpochapụ.
N'ime ụbọchị 180 nke natara ọkwa sitere na Ngalaba ndị uwe ojii, ụlọ ọrụ Ọfịs steeti kwesịrị ekwesị ga-etinye akwụkwọ chọrọ ụlọ ikpe na-achọ mkpochapụ n'aha ndị nwere mmebi iwu ruru eru. Thelọ ọrụ Attorney General nwere ike itinye akwụkwọ a chọrọ ka ọ bụrụ na onye ọka iwu Ọchịchị enweghị.
N’ime ụbọchị 180 mgbe anabatachara usoro ahụ a tụrụ aro, ụlọ ikpe ga-enyocha iwu ahụ achọrọ ma nye iwu mkpochapụ nke ụlọ ikpe yana ndị mmanye iwu ọ gwụla ma o kpebiri na mmejọ ahụ erughi nkọwa nke obere mmebi iwu.
Thelọ ikpe ahụ ga-enye ndị uwe ojii nke State uweojii, ndị na-ahụ maka njide, ụlọ ọrụ ikpe metụtara ndị omempụ dị mkpa, yana onye ahapụrụla ihe ndekọ ya.
Usoro mkpochapu akpaka anaghị emetụta ndị mmadụ mejọrọ ma ọ bụ ndị dara iwu Class 4 nke ndị ebubo na-abụghị maka mmebi iwu ruru eru. Ndị nwere ihe ndekọ ndị ahụ, yana ndị ọzọ nọ n'ọnọdụ ndị ọzọ, nwere ike ịrịọ ụlọ ikpe iche iche ka akagbuo ihe ndekọ ha.
NA-AKPANAGH R AKA NA-AKWGKWỌ CGW C AKW CKWỌ ANNBỌCH C EGO NA-AKANNKỌ
Onweghị ihe dị na atụmatụ ahụ amachibidoro ndị were ọrụ ịnwe usoro iwu ọrụ ndị ezi uche dị na ya gbasara ise anwụrụ ọkụ, ị consumptionụ mmanya, nchekwa ma ọ bụ ojiji nke cannabis n'ebe ọrụ.
Onweghị ihe dị na atụmatụ ahụ amachibidoro ndị were ọrụ ịdọ onye ọrụ ahụhụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ nke onye ọrụ maka imebi iwu nke onye were ya n'ọrụ ma ọ bụ iwu ọgwụ ebe ọrụ.
AKW TAKWỌ AH OFR AD ULB ADR US KWES USR C INWE CANABIS NA ILLINOIS
A na-edebe ụtụ ego niile na Ngalaba Iwu Cannabis ọhụrụ
Tụ ụtụ maka ihe ùgwù
7% nke nnukwu nnata site na ire onye na-azụ mkpụrụ, ọka ọrụ, ma ọ bụ onye na-ahụ maka ire ere cannabis.
Onye na-azụ cannabis na-atụ ụtụ ụtụ:
10% nke ọnụahịa azụtara - Cannabis nwere ọkwa THC na ma ọ bụ n'okpuru 35%
20% nke ọnụahịa a na-azụta - cannabis wetara ngwaahịa niile
25% nke ọnụahịa ịzụta - Cannabis nwere ọkwa THC dị elu karịa 35%
Taxestụ ụtụ isi a ga-abụ mgbakwunye na ọrụ ndị ọzọ, ikike, ma ọ bụ ịtụ ụtụ isi nke Steeti Illinois wetara ma ọ bụ ụlọ ọrụ obodo ma ọ bụ mpaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ndị na-azụ ahịa ụtụ isi nke obodo:
Ndi ime obodo nwere ike weputa ihe n’ego onye zuta ihe ruru 3% na mgbakwunye nke 0.25%
Mpaghara nwere ike wepụta onye na-azụ ahịa ụtụ isi gafere 0.5% na ebe jikọtara na mmụba nke
Ebe ndị a na-edozighi emezi nwere ike ịnwe ụtụ ọpụpụ nke onye zụrụ ahịa ruo 3.5% na mmụba nke 0.25%
NWAANY OF ANY OF NA-EGWU SITE N'ALAEZE CANABIS
Ngalaba Ego will ga-ewepụta atụmatụ ego FY20 n'ime ụbọchị na-abịa.
A ga-etinye ego na ụtụ isi na Nchịkwa Ọchịchị Cannabis ọhụrụ
Ndị ụlọ ọrụ gọọmentị na-ahụ maka ijikwa mmemme cannabis ndị okenye ga-enweta ego iji kpuchie ụgwọ nchịkwa site na ụtụ isi nke mmemme ahụ na-anakọta.
A ga-ekenye ndị ga-emefuru ego ọzọ dịka ndị a:
35% ga-agafere na General Revenue Fund,
25% ka a ga-ebufe na iweghachi ego obodo, maka iwughari obodo.
A ga-ebufe 20% gaa na ego ga-akwado ọrụ ahụike uche na ọrụ ị substanceụ ọgwụ
na ngalaba ahụ ike,
10% ka a ga-ekesara ya na Mmefu mmefu mmefu mmefu ego iji kwụọ ụgwọ akwụkwọ ego a na-akwụbeghị,
A ga-enyefe 8% na Usoro Iwu Mkpuchi Iwu Iwu na Iwu tokpụrụ Iwu Mmepụta Iwu Mmebe Iwu, na
A ga-ebufere 2% na Ọgwụ na-ahụ maka Ọgwụ iji nweta agụmakwụkwọ na mmata nke ọha.
OGWU NA ILLINOIS CANNABIS LAWS
Gọvanọ ahụ ga-ahọpụta onye ọrụ na-ahụ maka ịchekwa Cannabis ga-anọ na IDFPR. Onye a, ya na ndi otu ya ga-enwe ikike ime ndumodu na usoro ha siri metụta ihe eji eme okenye. Onye a ga-ahazikwa mbọ n'etiti ụlọ ọrụ steeti tinyere aka na ịhazi na ịtụ ụtụ ahịa ire cannabis na Illinois.
Maka ịmanye ma na-anakọta ụtụ isi metụtara ire nke cannabis.
Maka ọrụ na ikikere na nlekọta nke ebe a na-akọ ugbo, ndị na-akọ ihe, ndị na-ahazi nhazi, na ụlọ ọrụ na-ebugharị njem.
Maka ịhapụ inye ụlọ nyocha nke na-anwale cannabis
Ibu ọrụ maka ikikere na nlekọta nke otu ọgbakọ na-ekesa.
Ndị uwe ojii Illinois State
Ọ dịịrị maka ịlele azụ na onye ọ bụla metụtara mpaghara cannabis ikikere.
Maka ọrụ nyocha maka atụmatụ nchekwa maka ndị enyere ikikere niile.
Ọ dịịrị maka ịtụle akụkọ ndekọ akụkọ gbasara mpụ niile na ịchọpụta mmadụ niile nwere obere mmebi iwu ruru eru maka mkpochapụ akpaka.
Ngalaba Ahụike Ọha
Ibu ọrụ maka imepe atụmatụ ndị metụtara ịdọ aka na ntị ahụike yana ịhazi Kọmitii Ndụmọdụ Ọha nke Ahụike Ọrịa.
Ngalaba Azumaahịa na Ohere Ego
Maka ịhazi mmemme ịgbazinye ego, mmemme inyeaka, yana enyemaka maka ndị na-achọ ịha nhatanha.
Ngalaba Ọrụ Ndị Ọrụ
Maka ịnye ndụmọdụ na Kọmiti Ndụmọdụ Ahụike Ọrịa nke Ọrịa gbasara ọgwụgwọ ọgwụ na mgbochi.
Ibu ọrụ maka ịzụlite na mgbasa ozi ihe ọmụmụ nke ndị ahịa.
Maka ọrụ ịbepụta mpaghara ROC n'ofe steeti ahụ nwere ike itinye ego maka ROC osisi maka iweghachi obodo.
AHUPUTA PUPUTA AH ANDR AND OBI NA ANA EGO
Pasent iri abụọ nke ego a na-enweta site na ire ndị okenye na-eji cannabis ga-akwado mbọ iji lebara ị substanceụ ọgwụ na ahụike uche.
Mmachibido mgbasa ozi maka azụmahịa Ahịa
Onweghi ihe omuma ahia nke cannabis ga etinye ma obu dobe, ma obu mee ka edobe ya ma obu dobe ya, ngwa ahia, nke osisi cannabis ma obu onyinye cannabis aru obula ma obu site na uzo obula:
N'ime 1,000 ụkwụ nke ogige ụlọ akwụkwọ, ebe egwuregwu, ụlọ ọgwụ, ebe a na-ahụ maka ahụike, ebe ntụrụndụ ma ọ bụ ogige, ebe a na-elekọta ụmụaka, ogige ọha ma ọ bụ ọbá akwụkwọ ọha, ma ọ bụ ihe ntinye ọ bụla anaghị egbochi afọ mmadụ 21 afọ ma ọ bụ karịa;
Na ma ọ bụ n'ụgbọ njem ọha na ndị njem ma ọ bụ ebe nchebe ọha;
N'elu ma ọ bụ n'ihe ejiri nweta ọha ma ọ bụ nke ọhaneze;
Nke nwere ozi na-agha ụgha ma ọ bụ na-eduhie eduhie, na-akwalite ị excessiveụbiga mmanya ókè, na-egosi mmadụ na-erubeghị afọ iri abụọ na afọ iri na-eri cannabis, na-agụnye foto nke akwụkwọ osisi cannabis; ma obu
Na-agụnye ihe oyiyi ọ bụla emebere ma ọ bụ nke nwere ike ịmasị ụmụntakịrị, gụnyere katuatu, ihe ụmụaka, ụmụ anụmanụ, ma ọ bụ ụmụaka, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na onyonyo, ihe odide, ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu ndị a na-ejikarị na-akpọsa ụmụaka, ma ọ bụ na-e packomi nkwakọ ngwaahịa swiiti ma ọ bụ labeelu. ma ọ bụ nke na-akwalite ị consumptionụ cannabis.
Mmachibido ndị a anaghị emetụta ozi ndị na-adịghị mkpa.
Nkwado Nkwakọ ngwaahịa Illinois Cannabis
Thedọ aka na ntị ndị a ga-emetụta ngwaahịa niile nke osisi cannabis: “Ngwaahịa a nwere cannabis ma bu n'obi ndị okenye 21 ma karịa. Ojiji ya nwere ike imebi cognition ma nwee ike buru agwa. Umu nwanyi di ime ma obu ndi na enye ndi ara hapu ihe ha gha eme. Ọ bụ iwu megidere ire ma ọ bụ nye onye ọ bụla ihe a, enweghịkwa ike ibufe ya na mpụga steeti Illinois. Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịnya ụgbọ ala mgbe ị na-enweta ikike nke cannabis. Ikike ma ọ bụ iji ngwaahịa a nwere ike ibu ntaramahụhụ iwu siri ike na mpaghara ụfọdụ na n'okpuru iwu gọọmentị. "
A ga-enwerịrị afọ cannabis niile a kụrụ n’ozi maka nkesa na cannabis n’ime akpa akara, akara.
Nkwakọ ngwaahịa ọ bụla nwere osisi cannabis ga-abụ nke na-eguzogide ụmụaka na ọkụ na-agbanwe agbanwe na ụkpụrụ dị ugbu a, gụnyere ụkpụrụ Ọrụ Ndị Ọrụ Ahịa Consumer Iwu Iwu Ahụ Na-ekwupụta.
Ihe ngosi aha ngwaahịa ọ bụla ga-ebu, gụnyere ihe ndị ọzọ, ụbọchị “ojiji” na akara ahụ, ọnụọgụ mkpụrụ osisi cannabis dị na ngwaahịa ahụ, yana ndepụta ọdịnaya.
Ngwa ahịa cannabis niile ga-enwerịrị nkwupụta ịdọ aka ná ntị enyere aka maka ndị na-azụ ahịa, ọnụọgụ a ga-enwe ike ịgba mbọ hụ nke onye ahịa na-enyocha ngwugwu, nke nwere ike ọ gaghị ekpuchi ma ọ bụ kpuchie ya n'ụzọ ọ bụla.
Nkwakọ ngwaahịa ekwesịghị ịnwe ozi nke:
Ndi ugha ma obu onye nduhie;
Na-akwalite oriri riri oke;
Na-egosiputa onye na-erubeghị afọ 21 na-eri cannabis;
Na-agụnye ihe oyiyi ọ bụla emebere ma ọ bụ nke nwere ike ịmasị ụmụaka, gụnyere katuaka, ihe ụmụaka, ụmụ anụmanụ, ma ọ bụ ụmụaka, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na onyonyo, ihe odide, ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu ndị a na-ejikarị akpọsaara ụmụaka, ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ akara ọ bụla nke yiri ya. Ngwaahịa ọ bụla dị maka oriri dị ka swiiti dị na azụmahịa, ma ọ bụ na-akwalite oriri nke cannabis;
Nwere akara ọ bụla, ọkọlọtọ, mkpuchi aka, ma ọ bụ insignia ọzọ nwere ike iduhie onye ahịa ya ikwenye na State nke Illinois kwadoro ya, ma ọ bụ jiri ya.
EGO NA-EKWU NA-EGO maka CANABIS NA ILLINOIS
Ezinaụlọ ndị ụlọ Illinois ka ha tolitere ahịhịa ise na-eto cannabis n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ:
The grower bụ okenye gbara afọ 21 ma ọ bụ karịa,
Onye ahia ahia nọ n'ụlọ nke nwere ebe obibi ma ọ bụ nwee ikike n'aka onye nwe ya,
Ọka amachaghị ma ọ dịkarịa ala ịgha mkpụrụ ise ma ọ bụ obere,
Onye nwe ụlọ ga-anọrọ cannabis n'ime ụlọ akpọchiri iche iche ndị otu ezinaụlọ na-erubeghị afọ iri abụọ na otu, na
Amachibidoro ịgha mkpụrụ osisi na ahịhịa na-eto eto n'ihu ọha.
EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO KA EGO NA-AKWA AKWUKWU EGO
Obodo nwere ike ịgafe iwu nke gbochiri nguzobe nke ihe di n'ime.
Mpaghara otu gọọmentị ga-anakwere usoro nzipụ 'pụọ n'ime otu afọ nke ụbọchị nke iwu ahụ ma ọ bụ na ha amachaghị ịnakwere ndokwa' wepu 'site na ntụgharị mpaghara.
Ndi ime obodo nwere ike ime ka amachie uzo ihe ndi ozo banyere ulo oru ugbo nke enyere ha ikike, ndi oru okacha amara, ndi oru nhazi ya na ebe obibi.
Hụ gị n’oge na - adịghị anya ma ọ bụrụ na ịdenye aha.
Cheta ịdenye aha. @ https://www.youtube.com/cannabislegalizationnews